I-iPhone 7 ecwebezelayo emnyama ayinconyiwe kakhulu | Ngivela kwa-mac
I-iPhone 7 ecwebezelayo emnyama ayinconyiwe kakhulu
I-iPhone 7 no-7 plus isimangaze ngomklamo owashintsha kancane. Ngokucaciswa okuhle kakhulu futhi okumangazayo kwangaphakathi nezici, nangokuphela okusha kwemodeli ethile. Okumnyama okucwebezelayo sekufikile futhi asicabangi ukuthi kunconywe kakhulu. Lokhu kuphawulwe ngamanye amabhulogi afana ne-Apple5x1 futhi manje sizochaza izizathu zethu.
Ithoni nombala, kanye nokubukeka okubonakalayo, akunamthelela ekusebenzeni noma osukwini nosuku. Inqobo nje uma singakhulumi nge-hardware kepha kuphela ngento ethile ebonakalayo. Akukhathalekile ukuthi unalo yini igolide noma umnyama, nazo zizosebenza kahle futhi izithombe zizobabazeka, kanye namandla azo. Inkinga ukuthi omnyama ocwebezelayo ushaya kakhulu, yebo, kepha ngokuhamba kwesikhathi kuzodala izinkinga. Ilalele kakhulu indatshana yanamuhla. Ungayeki ukufunda.
1 I-iPhone 7: Idizayini, imibala namathoni
2 Isiphetho esingcolile esingaklwebha.
I-iPhone 7: Idizayini, imibala namathoni
Sinemibala eminingi nemibala ongakhetha kuyo. Ngo-2014 sabona ushintsho olungazelelwe ekwakhiweni kwe-iPhone. Inguquko ebalulekile yabasebenzisi bohlobo lweBitten Apple. Sisuke kumamodeli ayi-3,5 noma ama-intshi ama-4 saya ku-4,7, ebivele isiningi impela futhi ingamasentimitha angu-5,5 amangazayo. Kube ukufika kwe-iPhone 6 ne-6 plus. Ukushiya eceleni noma ngabe imodeli enkulu ingagotshwa noma cha, ake sikhulume ngamathoni ayo ahlukene. Zazifana nesasizibonile kuma-5s, kepha ngombala othambile futhi omnandi ngokwengeziwe. Igolide elihle kakhulu, isikhala esincane esikhanyayo nesiliva elimangalisayo.
Kamuva ngama-iPhone 6s no-6s plus bethule i-pink, okwakungekubi neze. Babuye bavumelanisa ama-iPads kanye nama-Macbook alo mkhuba opinki. Manje, kulo Septhemba, nge-iPhone 7 banqume ukugcina idizayini unyaka owodwa, ukusimangaza ngosuku lokugubha iminyaka engu-XNUMX ngonyaka ozayo. Kepha basusile isikhala esimpunga base bethula ama-shades amabili amasha. Ngakolunye uhlangothi umat emnyama futhi ngakolunye umnyama ocwebezelayo, oza nesaziso esincane. Esikhathini esiyiminyaka emibili, sesisukile emibala emi-3 sesikhetha kusuka kwemihlanu, omunye wawo ungowezinhlobo ezingama-5 no-128Gb kuphela, okungukuthi, kwezingu-256 eziyisisekelo ngeke sizithole.
Uma kusukela ekuqaleni ubufuna inketho enesitoreji esiningi ungakhetha lethoni ngaphandle kwezinkinga, kepha cabanga ngakho. Kunokubi okuthile okufanele ukwazi ukugwema ukumangala.
Isiphetho esingcolile esingaklwebha.
Abezindaba abaningi namabhulogi baphawula ukuthi kungaba iphutha elikhulu ku-Apple ukwethula lolu hlobo lokuqeda. Ngiyavuma ngokwengxenye. Ngakolunye uhlangothi, kukusiza ukukhulisa ukuthengisa namuhla futhi uhehe ukunakwa, kepha ngokuhamba kwesikhathi kulimaza umkhiqizo. Kungalimaza kakhulu uma i-iPhone iqhuma lapho ishaja noma ngokubanika uhlobo oluthile lokusetshenziswa, kepha lokhu futhi kungaba kubi. I-Apple uqobo ixwayisa kuwebhusayithi yayo ngokubhala okuncane ukuthi i-iPhone 7 ecwebezelayo emnyama ibucayi kakhulu.
Hhayi ukuthi ifoni izophuka noma yini efana naleyo. Lokho abakushoyo ukuthi ingaqhekeka noma, kunalokho, iklwebhe kalula kunama-matte shades. Igolide, isikhala esimpunga nesiliva akuklwebheki kalula noma kungabonakali, kepha kulokhu uzokwazi. Kuklwebhiwe futhi neminwe yeminwe iyabonakala kakhulu uma uyicosha. Ngemuva nangesikrini. Amamodeli akhanyayo ahlanzeke kakhulu futhi anikeza isithombe esihle ngokwengeziwe, ngombono wami. Muhle njengokubukeka okumnyama okucwebezelayo ezithombeni nakwezikhangiso, uma uyigqoka ingcolile noma igayiwe osukwini lwakho nosuku izobukeka imbi kakhulu. Yidivayisi engu- $ 800+, ngakho-ke asincomi lo mthunzi.
Uma nganoma yisiphi isizathu ufuna abamnyama abacwebezelayo, sincoma into efanayo naleyo eshiwo i-Apple kuwebhusayithi yayo: Beka ikhava kuyo. Yize kungeyona esemthethweni kulabo ababiza kakhulu, kepha ivikela icala layo.
By indlela I-Apple Watch Series 2 nayo ithengisa kakhulu amamodeli anamathoni amnyama. Kubukeka sengathi lo nyaka uyimfashini.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » iPhone » I-iPhone 7 ecwebezelayo emnyama ayinconyiwe kakhulu
Ungawasebenzisa kanjani amaculo wengoma ku-Apple Music nge-iOS 10
Ungayisebenzisa kanjani iDigital Touch kumilayezo nge-iOS 10 (II)